Ubudade - Ubungqina Bokushumayela Abafazi Bamazwi Eyona Njalo
Inyaniso ye-TLC ibonisa ukuba iSisterhood ilandela abafazi abathathu base-Atlanta abatshatile kubavakalisi. Ngaphandle kokugcinwa okanye ukunyanzeliswa, aba bafazi abahambeli emadodeni abo kodwa bazinziwayo.
Kwaye aba abafazi bakho abavakalisi. Bathetha ngokuvulekileyo malunga nokwabelana ngesondo, nokusebenzisa iziyobisi, nokuphuma esikolweni esiphakeme. Awuvumeli ukholo lwabo lubagcine ekubeni bangabonisi okanye baqhekeze ngaphandle, bembethe isikhumba okanye banandipha izinto ezintle ebomini.
Ukulungelelanisa kwihlabathi lonqulo, aba bafazi-ababizwa ngokuba "ngabafazi bokuqala" kwiicawa zabo, bamele i-subset encinci yeevangelicalism ehambelana neLizwi lokholo inkolo yezobugcisa , egcina-phakathi kwezinye izinto-ukuba ubutyebi bezimali iintsikelelo zikaThixo kwaye kufuneka zivunywe.
Ukudibanisa umxholo we -Disterhood uze ufumane okungakumbi malunga nabafazi bashumayeli abaphikisanayo.
Ukutshata noMfundisi uBrian D. Scott, uDominque Scott naye unguMfundisi kwiCawa yeBanga eliPhezulu loBomi (okokuqala, ngokutsho kweChristian News Network, yavalwa ngo-2012).
Ukuyeka ukuhamba esikolweni esiphakeme, u-Dominique kamva uzalise iGED yakhe kwaye wabuyela esikolweni, ufumana i-Master Degree kwiBhizinisi kwaye ulandela iMfundiso kwiCandelo lobuNgcaciso lobuKristu. UDominque noBrian banabantwana abane: Jermicheal, uEmmanuel, uBrandy LaJoy, kunye noColandJustice Lovejoy.
Kwesinye isiqhelo sokuqala soDade , i-Domonique ichaza indawo awayeyibhembile ngayo kuqala i-crack cocaine.
Ngomyeni wakhe uDkt Brian Lewis ("umKristu ongumKristu kuYesu"), uTara ugijima kwiChenomenal Life Church, Inc; izabelo zokushumayela; Umninimzi womboniso weTV, i- Phenomenal Life namhlanje, kwaye wabhala incwadi ye-ebook eyabhalwa yi-Self- Fit, Ehle kakhulu neyakhayo: Zibuyisele kwi-Outside Out!
Umqeqeshi wempilo eqinisekisiweyo kunye nomdla wezondlo, oneminyaka engama-41 ubudala waseDallas, ungumntu ochazwe ngokuthi "mompreneur," owasekela uMomFit 4 Life, inkampani enenjongo yokudala izixazululo zobomi beMoms kuzo zonke iiplani-iMpilo. , Isondlo, UkuFinwa, iNkcubeko, iNtsapho, Indlela yokuphila, kunye nomama wonke (uMama + Ukutshisa). " Inkampani okwangoku inikeza umagazini wedijithali, umgca wokugqoka, kunye neprogram yoqeqesho "ukuxhobisa nokuxhobisa amaMama ukuba bahlaziye kwaye bafikelele kwiinjongo zabo," kwaye usebenza ngokunyaniseka kwempatho ye- TV kuMom.
UTara noBrian banabantwana abathathu.
Wazalelwa eBoston, eMassachusetts, u-Ivy wathuthela e-Atlanta ukuya kwi-College yaseSpellman, apho waphumelela khona ngo-2000. Utshatile kuMfundisi uMark A. Couch (owazalwa ngoSeptemba 24, 1974), umsunguli we-Emmanuel Tabernacle Church e-Atlanta.
Ngaphambi kokuba ashade nomshumayeli, Ivy wayengumculi / umbhali wengoma owasebenza kunye nenani labaculi abaphumeleleyo, kuquka ne-band Xscape, eyaqalisa umsebenzi weenkwenkwezi uAndrus Burrus.
Kwisiqhelo sokuqala soDade , umyeni kaMicko uMark unikezela ngeentonga, ngokubangela ukuba athi, "Abantu abayilindele ukuba umshumayeli nomkakhe babe nobomi obuhle bobulili."
UDeana ujoyina umyeni wakhe u-Myles ekusebenzeni icawa yakhe, Unqulo kunye neNkathazo, abayifumene ngo-2006. UDeana naye ungumfundisi ebandleni.
UDeLana kunye no-Myles nabo banomculi / abaculayo kunye neDeLana kaninzi benza ngeebhulukhwe zesikhumba kunye neesithende (spit and he's a ring ring). Esi sibini sinabantwana ababini: eBrooklyn naseLyncoln.
Njengabanye abafazi besonto , u-Christina ujoyina umyeni wakhe u-Anthony Murray ekusebenzeni icawa yabo, i-Oasis Family Family Church, eyayisungula eDallas, eGeorgia ngo-2006. Ingxelo yokuba iLatina kunye ne-Afrika yaseMelika inokuthi iyathetha kwibandla labo .
Esi sibini sinamadodakazi amabini aselula, uJasena noJade. Kwisiqalo sokuqala, u-Christina ubonisa ukuba unesifungo sesifuba.
IEP Iinjongo zokuPhathwa kweNtuthuko
I-Candle ye-Candle Fire Magic Trick
'Intswelo': I-Slang yesiFrentshi 'Enyanisweni, i-Bloody' Incedo
I-Top 5 ye-Conifer-Killing Insects
Iimifanekiso eziPhezulu zePasika zezingane kunye neentsapho
Imizobo kaCharles Dickens, uMvelisi weNkulu yamaVictoria
Inkcazo yeThathu yeNtetho kunye neMzekelo (iKhemistry)
I-Freestyle Ukubamba isandla kwiNkcazo yokungena
'Ubomi kwiiNgxelo ze Mississippi'
UFumihiko Maki, iPhotofolio ye-Architecture ekhethiweyo
I-Perl Ilungelelanisa unshift () Umsebenzi - I-Quick Tutorial
Ngoobani abaNcinci nabancinci kakhulu kwiBritish Open?